/ Products / vamwe / Formestane (566-48-3)
Rating: SKU: 566-48-3. Category: vamwe
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhutano hweFormestane (CAS 566-48-3), pasi pemutemo weCGMP uye kutaridzika kwehutano hwehutano.
Formestane oiwder ndiyo yekutanga yakasarudzika, mhando I, steroidal aromatase inhibitor inoshandiswa pakurapa kweestrogen-receptor yakanaka kenza yemazamu mumashure-evanhukadzi vanopera. Formestane inodzvinyirira kugadzirwa kweestrogen kubva kuanabolic steroid kana prohormones. Inoitawo seprohormone kune 4-hydroxytestosterone,…
Formestane (566-48-3) kushandiswa mu-steroid cycle
Formestane (566-48-3), inonziwo lentaron, zita remakemikari: 4-hydroxyandrostenedione.
Formestane (566-48-3) Kushandisa
Shanduro yakakurumbira ye formestane yakatengeswa yaiva mune fomu yejeri yejeri uye yakange yakasungwa pa 100-200mgs kuburikidza nekushanda. Vashandi vanoiisa pahuni yakachena, yakaoma uye vakuya zvakakwana; kazhinji pahudyu kana pamusoro. Zvakatora 1 kumaminitsi e5 kuti aome. Iyo injectable version yezvose zvinokonzerwa nekenza yebonde uye bodybuilders ndeye 125mgs kaviri pavhiki kana 250mgs kamwe pavhiki.
Formestane (CAS 566-48-3) haikonzeri mhedzisiro yakawanda kunze kwekunge yashungurudzwa. Dzimwe nguva vagadziri venyama vanogunun'una nezveakaomeswa majoini, manzwiro anochinja, libido shanduko, kana kuputika, izvo zvinowanzoitika kune ese AI's. Imwe mhedzisiro mhedzisiro yakaderera HDL (yakanaka) cholesterol, saka unofanirwa kutarisa kudya kwako.
Formestane yechipiri, irreversible, steroidal aromatase inhibitor. Inhibits the enzyme aromatase inoshandiswa kuchinja uyerogens kune estrogen, nokudaro kudzivirira isrogen.
Kenza yepabonde ingave isrogen yakajeka kana isingazivi. Ruzhinji rwemakondombera echero ndeeestrogen. Estrogen mawere echepabonde anotema mazamu anoenderana neserogen kuti iite zvakanaka. Nokudaro kubviswa kwe estrogen kubva mumuviri kunogona kuva mushonga unoshanda wemakemikari anokonzerwa nekenza yemazamu.
Formestane yakarongedzwa zvakananga kurapwa kwevakadzi ve postmenopausal. Kusiyana nevakadzi vanotungamirirwa nevemenopausal vanobudisa maestrogen akawanda mumapapiro omukati, vakadzi ve postmenopausal vanobudisa yakawanda yesrogen mumakumbo emishonga pamwe nekubatsirwa ne-aromatase enzyme. Formestane (566-48-3), aromatase inhibitor, inogona kubatsira kuderedza kugadzirwa kwemunharaunda yeestrogen nokuvhara enzyme ye aromatase mumakumbo emakungwa (kureva mavara edziviriro echepa) kubata chirwere chinonzi hormone sensitive breast.
Nzira yekutenga Formestane kubva kuAASraw